Ottone Archivi - Dafne Kere
Home shop Akpado: Echi
Home / shop / Ngwaahịa akpadoro "Brass"
Igosipụta niile 32 pụta
Ejiri akpụkpọ anụ na kristal - Isi: cm. 13 x 22 x 30h - (DFL)
Brass lumen na kristal - Akụkụ: cm. 14 x 14 x 30h - (DFL)
Okpokoro ifuru osisi - Dimensions: cm. L25 x 32h - (DFL)
Okpokoro akpụkpọ ụkwụ guzoro - Ebe: cm. L25 x 38h - (DFL)
Okpokoro ifuru osisi - Dimensions: cm. L32 x 21h - (DFL)
Okpokoro akpụkpọ ụkwụ guzoro - Ebe: cm. L25 x 36h - (DFL)
Ejiri akpụkpọ anụ na kristal - Isi: cm. 30 x 20 x 30h - (DFL)
Osisi odo odo na okooko osisi na epupụta - Akụkụ: cm. L25 x 40h - (DFL)
Esi okooko osisi na osisi epupụta - Akụkụ: cm. L35 x 47h - (DFL)
Okpokoro ifuru osisi - Dimensions: cm. L35 x 47h - (DFL)
Oghere nku ọla na kristal- Nkeji: cm. 43 x 32 x 50h (DFL)
Oghere fatịlaịza ọla - Akụkụ: cm. L48 x 61h - (DFL)
Ulo elu ulo a na-acha uhie uhie - Akụkụ: cm. 55 x 20 x 55h - (DFL)
Brass lumen na kristal na lampshade - Akụkụ: cm. 35 x 35 x 58h - (DFL)
Brass oriọna okooko osisi na epupụta - Akụkụ: cm. L48 x 61h - (DFL)
Okpukpo uhie nke uhie na okooko osisi na akwukwo - Akuku: cm. 55 x 55 x 61h - (DFL)
Ulo elu ulo a na-acha uhie uhie - Akụkụ: cm. 40 x 20 x 70h - (DFL)
Oghere nkuzi na ákwà ndo - (UL)
242€ Aggiungi al carrello
Okpokoro ifuru osisi - Dimensions: cm. L40 x 70h - (DFL)
Akara chandelier nke a na-eme nke ọma - Isi: cm. 65 x 65 x 100h - (DFL)
Esi okooko osisi na osisi epupụta - Akụkụ: cm. L40 x 70h - (DFL)
Brass oriọna okooko osisi na epupụta - Akụkụ: cm. L38 x 65h - (DFL)
Okpukpo uhie nke uhie na okooko osisi na akwukwo - Akuku: cm. 65 x 25 x 35h - (DFL)
Oghere nkuzi na-esi n'ala ala - Dimensions: cm. 52 x 52 x 182h - (DFL)
317€ Aggiungi al carrello
Ogwe nku ọka na okooko osisi na epupụta - Akụkụ: cm. 52 x 52 x 182h - (DFL)
Okpokoro oriọna nke nwere okooko osisi na akwukwo - Odiri: cm. 50 x 50 x 117h - (DFL)
Oghere nkuzi nke ọla ala na kristal - Akụkụ: cm. 45 x 45 x 185h - (DFL)
Chandelier na kristal - Akụkụ: cm. 80 x 80 x 100h - (DFL)
458€ Aggiungi al carrello